Umlando we-FSF: Isigaba sewebhu esisha esinezinyathelo ezibaluleke kakhulu ze-FSF | Kusuka kuLinux
Njengayo yonke into ngokuhlanganyela kwabantu lokho kuzungeza itimu ethile, intshisekelo noma into ekhonzwayo, labo abayithandayo Isoftware yamahhala, Umthombo Ovulekile kanye ne-GNU / Linux siqinisekile ubuntu nezinhlangano ezifanele lokho kusethe ithoni yethu isizinda se-IT samahhala futhi esivulekile.
Endabeni yobuntu esinabo URichard Stallman y Linus Torvalds, phakathi kokunye okuningi. Futhi maqondana nezinhlangano sine- Isoftware yamahhala (FSF), phakathi kokunye okuningi. Futhi manje, singafunda okuningi mayelana nenhlangano "FSF" sibonga iwebhusayithi entsha ebizwa "Umlando we-FSF".
Lokho wukuthi, manje noma ngubani angafunda kabanzi nge Isoftware yamahhala (FSF) o Isoftware yamahhala (FSL) ngeSpanishi, ngokuvakashela nje iwebhusayithi yayo esemthethweni isigaba esisha esinolwazi esibizwa "Umlando we-FSF" noma umane «Umlando we-FSF» ngeSpanishi.
Kuyaphawuleka ukuthi, ezinsukwini ezimbalwa ezedlule sinikeze ukubonwa okuncane okufundisayo ngalezi zindaba. Ngokuqondile mayelana nokujwayela kwethu «Isifinyezo sikaJulayi 2021». Lapho sibukeza okulandelayo:
20-07-2021 - Inqubekela phambili yenkululeko: Ukubuyekezwa komlando we-FSF: Namuhla sethule ikhasi lomugqa wesikhathi womlando we-FSF okhombisa ukubuka konke okucacile ngezinyathelo zenhlangano, njengokuthi yakhululwa nini i-GPLv3, noma lapho kwenzeka ingqungquthela yokuqala ye-LibrePlanet. Onke lawa makhasi anezixhumanisi ezizokungenisa ujule emgodini wonogwaja ukukhulisa ulwazi lwakho ngomlando womsebenzi we-FSF kanye nokunyakaza kwamahhala kwesoftware ngokujwayelekile. Izindaba ze-FSF kokuPosi: Julayi 2021: Okuhle, Okubi Nokuthakazelisa Kwesoftware Emahhala
1 Umlando we-FSF: Sibutsetelo somlando we-FSF
1.1 Inhloso Yomlando we-FSF
1.2 Izinyathelo ezinkulu zenhlangano ye-FSF
1.2.1 Izenzakalo ezibikiwe ngaphambi kuka-2000
Umlando we-FSF: Sibutsetelo somlando we-FSF
Inhloso Yomlando we-FSF
Ngokubabaza isigaba sewebhu esisha shayela «Umlando we-FSF» ungathola imininingwane nemininingwane ethokozisayo futhi esebenzisekayo, ezokuvumela ukuthi wazi kabanzi ngokujula umlando wenhlangano ehlonishwa kanjalo, nayo esondele ukugubha i- usuku lokuzalwa lwamashumi amathathu nesithuphae Okthoba 2021.
Njengoba, "Umlando we-FSF" yenzelwe ukunikela bonke abalandela futhi babonane ne- "FSF" ukubuka konke okungcono futhi okucacile kwe- mlando wenhlangano, noma ngamanye amagama, ikhombisa ngokusobala ifayili le- Umugqa wesikhathi womlando we-FSF.
Izinyathelo ezinkulu zenhlangano ye-FSF
Ukuze singenzi lolu shicilelo lube lukhulu kangaka, sizokhuluma kafushane kuphela nge mlando ezibalulekile lokho kwenzeka ngaphambi konyaka ka-2000 oshiwo lapho. Ngaleyo ndlela, ukuthi uma kwenzeka ufuna ukujula kuyo yonke i- izenzakalo zomlando kubuyekezwe ngemuva konyaka ka-2000, vakashela futhi uhlole iwebhusayithi ye "Umlando we-FSF".
Izenzakalo ezibikiwe ngaphambi kuka-2000
Mashi 1985 - URichard M. Stallman ushicilela iGNU Manifesto: I-GNU Manifesto yabhalwa nguRichard Stallman ngo-1985 ecela ukwesekwa ekuthuthukisweni kohlelo lokusebenza lwe-GNU. Kuchaza ukubaluleka kokuthuthukisa iPhrojekthi ye-GNU, futhi kusungula isisekelo sefilosofi sokuqalisa iphrojekthi.
Okthoba 1985 - IFree Software Foundation (FSF) yakhiwa noRichard Stallman njengomongameliLokhu kuphawula ukuzalwa kwe-FSF, okuqhubeka nokuba yikhaya lenhlangano leProjekthi ye-GNU, futhi kunikeza le kanye neminye imiklamo yesoftware yamahhala ngengqalasizinda ebucayi.
Februwari 1986 - Ukushicilelwa kokuqala kwencazelo yeFree SoftwareYize yashicilelwa ngokusemthethweni emakhasini e-gnu.org okokuqala ngqa ngo-1996, kwachazwa incazelo yokuqala yesoftware yamahhala kwi-Bulletin yokuqala ngo-1986.
Februwari 1989 - Ukushicilelwa okusemthethweni kweGNU General Public License (GPL): I-GNU GPL ingumongo wamandla nokuqhubeka kwesoftware yamahhala. Amandla welayisense, kanye nengqikithi yenkululeko yesoftware, kusinqumo sayo sokuthi noma yimuphi umsebenzi ovela kokunye noma ohlanganisiwe kufanele ushicilelwe ngaphansi kwelayisensi efanayo, ngaleyo ndlela kuqhutshekwe nenkululeko yakho. Lokhu kuvumela abasebenzisi inkululeko yokwenza, ukukopisha, ukuguqula kanye nokwabelana ngomsebenzi ngokukhululeka.
Okthoba 1999 - I-UNESCO ne-FSF bethula i-Free Software Directory: I-Free Software Directory iyikhathalogi yokubambisana yezinhlelo zekhompyutha ezikhululekile ngokuphelele (eziqondwa mahhala njengenkululeko). Uhla lwemibhalo njengamanje luqukethe ngaphezu kwamashumi ezinkulungwane zamaphakeji wesoftware wezinhlobo eziningi, eziningi.
Okwalabo abafisa ukujulisa noma ukugcwalisa abanye imiqondo eyisisekelo noma olunye ulwazi ngezihloko ezihlobene nomkhakha we Isoftware yamahhala, Umthombo Ovulekile kanye ne-GNU / Linux, Sishiya wena ngezansi ngezansi, isixhumanisi esilandelayo kwesinye sezixhumanisi zethu ze- okuthunyelwe kwangaphambilini okuhlobene ngolwazi oluhle kakhulu ngalo:
Imiqondo, ukufundwa namawebhusayithi okufanele wonke umsebenzisi we-GNU / Linux akwazi
Ngokufingqa, lesi sigaba sewebhu esisha sesiza esisemthethweni se- "FSF" shayela "Umlando we-FSF" noma umane «Umlando we-FSF», ngeSpanishi, iyi- isitsha esiyigugu semininingwane yomlando lokho kuzobuyekezwa ngokuhamba kwesikhathi, futhi kuzoba wusizo kakhulu ikakhulukazi ezizukulwaneni ezintsha eziqala ukuphenya nokufaka okwethu isizinda se-IT samahhala futhi esivulekile.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-GNU / Linux » Umlando we-FSF: Isigaba sewebhu esisha esinezinyathelo ezibaluleke kakhulu ze-FSF